Joba 42 - Ny Baiboly
Joba toko 42
Valintenin'i Joba - Tsinin'Iaveh ny sakaizan'i Joba - Averina amin'ny toetrany taloha Joba.
1Dia namaly an'ny Tompo Joba ka nanao hoe:
2Fantatro fa mahefa ny zavatra rehetra hianao,
ka tsy misy hevitra sarotra ho anao.
3Iza moa izato manamaizina ny fandaharan'Andriamanitra tsy amim-pahalalana?
Eny, niteny tsy amim-pahalalana tokoa aho,
ny amin'ny zava-mahagaga tsy takatro aman-tsy fantatro!
4Mihainoa fa hiteny aho,
hanadina anao aho, ka valio.
5Ny sofiko taloha efa nandre filazana anao,
fa ny masoko kosa ankehitriny efa nahita anao.
6Koa dia manameloka ny tenako aho, sy manenina
eo amin'ny vovoka sy ny lavenona.
7Nony avy nilaza izany teny izany tamin' i Joba Iaveh, dia hoy izy tamin'i Elifaza avy any Temana: Mirehitra aminao sy amin'ireo sakaizanao roa lahy ny fahatezerako; satria tsy mba mifanaraka amin'ny marina tahaka ny nataon'i Joba, ny filazanareo ahy. 8Koa ankehitriny mandehana maka vantotr'ombalahy fito sy ondralahy fito, dia mankanesa eo amin'i Joba mpanompoko ka manatera sorona dorana ho anareo. Ary Joba mpanompoko hivavaka ho anareo, fa izy ihany nohany tsy hamaliako anareo araka ny hadalanareo, satria tsy mba mifanaraka amin'ny marina tahaka ny nataon'i Joba ny filazanareo ahy.
9Dia nandeha Elifaza avy any Temana sy Baldada avy any Sohe ary Sofara avy any Naamana, nanao araka izay voalazan'ny Tompo taminy, ka nankasitrahan'ny Tompo ny fivavahan'i Joba.
10Raha mbola nivavaka ho an'ireo sakaizany Joba, Iaveh kosa namerina an'i Joba amin'ny toetrany voalohany, ary naveriny indroa heny tamin'i Joba ny fananay rehetra. 11Dia tonga avokoa ireo rahalahiny sy anabaviny mbamin'ny sakaizany taloha namangy azy sy niara-nihinana taminy tao am-tranony. Nangoraka azy sy nampionona azy izy ireo, noho ny fahoriana nahatran'ny Tompo taminy teo; ary samy nanome azy kesita iray sy masom-bolamena iray avy izy rehetra.
12Nambinin'ny Tompo mihoatra noho ny tamin'ny taloha ny andro niainan'i Joba taty aoriana, ka nanana ondry efatra arivo amby iray alina, rameva enina arivo, omby arivo tsiroaroa, ary ampondravavy arivo. 13Nanan-janaka fito lahy sy telo vavy izy: 14ny voalohany nataony hoe Jemima, ny faharoa Ketsia, ary fahatelo Keren-Happoka.
15Tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ireo zanakavavin'i Joba ireo tamin'ny tany rehetra; nomen-drainy anjara lova eo amin'ireo anadahiny izy.
16Velona efapolo amby zato taona Joba taorian'izany; ka nahita ny zanany lahy sy ny zanakalahin'ny zanany lahy hatramin'ny taranaka fahefatra.
17Dia maty Joba, efa antitra sy voky andro niainany. >